Daawo: Wararkii u dambeeyay Jigjiga iyo Xisbiga Doortay Madaxwaynaha Cusub oo looga yeedhay Adis-ababa | KALSHAALE
Daawo: Wararkii u dambeeyay Jigjiga iyo Xisbiga Doortay Madaxwaynaha Cusub oo looga yeedhay Adis-ababa
Aug 10, 2018 - 1 Aragtiyood
Jigjiga ( Kalshaale ) Waxaa maanta dib u bilaabmay duulimaadyadii u kala gooshi jiray magalooyiinka Addis Ababaiyo jigjiga, Iyadoo Diyaarad siday rakaab ay ka soo qaaday magaalada Addis Ababa ayaa gaartay magalaad Jigjiga.
Waa markii ugu horeysay tan iyo Sabtidii oo ay diyaarad ka degto magalada Jigjiga, Waxaana si tartartiib ah caadi ugu soo laabanaya noolasha magaalada Jigjiga, iyadoo a dib loo furay qaar ka mid ah ganacsiyada iyo bangiyada magaaladasi.
Dhinaca kale Dawladda Federaalka Itoobiya ayaa Xubnaha Golaha dhexe ee Xisbiga DDSI oo dhowaan doortay Madaxwayne Cusub looga yeedhay magaalada Adisaba, Waxaana la sheegay inay ku gacan saydheen Codsiga ka yimid Dawladda dhexe ee Itoobiya.
Masuul u ka hadlay Maamulka Dawlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlay Arintan ayaa sheegay In Faragelin Qaawan lagu hayo, Wuxuuna sheegay inuu xidhan yahay Madaxwaynahoodii.
Ma rabaan xornimo iyo sharaf.
Waxaa laga sii daayay xabsiyadii Ethopiya ee ay ka buuxeen.Waxaa la sii daayay qalbi dhagax si shuruud la’aan ah ayaa loo sii daayay qalbi dhagax oo meel ugu xidhan Tegreega.Waxaa la mooday dad u fikiraya sida dadka caadiga ah,laakiin waa dad raba inay qori ku xoogsadaan.
Waxay rabaan in la siiyo waxa ay cunaan,kadibna loo dhiibo qori iyo rasaas oo la yidhaa soo laayay Somalida.Intaa ayay rabaan e wax kale ma garanaayn.Hubka qaata oo soo laaya Somalida ayay rabaan.
Goorma ayay xasuusteen Somalinimada ay haatan raadinayaan iyo distuurka ay sheegyaankkkkkkkkkkkkkkk
Mayd Somaliyeed oo dhaanto lagu dul ciyaaro ma jirtee la qabsada nabada iyo nolosha.